I-WOWOW Kitchen Faucet Sprayer Heads G1 / 2 Isixhumi
Ikhaya / izesekeli / Izesekeli zefenisi / WOWOW Ikhishi ompompi Isifutho Heads G1 / 2 Isixhumi
I-Sprayer inezimpawu zokugqwala, ukuklwebeka kanye nokulimaza ukungatheleleki, okungasetshenziswa isikhathi eside. Iphelele ngendawo yokudlela, indawo yokuphumula nokusetshenziswa kwasekhaya.
ISAZISO ngaphambi kokuthenga:Le nhloko yombhobho 5001 KUPHELA Isixhumi se-G1 / 2 (MALE) (Cishe u-2 cm noma ama-intshi angu-0.8), Hhayi i-NPT, Hhayi indawo yonke
IKHWALITHI EPHEZULU: Ukufakwa kwekhanda kompompi wasekhishini kwenziwa ngepulasitiki ebangeni lobunjiniyela (i-ABS) kanye ne-eerator ye-Neoperl eyakhiwe, ingasetshenziswa isikhathi eside ngesikhathi sokusetshenziswa kwansuku zonke, isiphetho se-nickel ebhulashiwe silwa nokugqwala futhi akukho zimpawu zeminwe ezisele.
3 INDLELA YOKUSEBENZA: Amanzi okusakaza angaguquguquki ahlinzeka ukugeleza okushelelayo nokuncane, akukho chaphaza; amanzi wokufafaza angahlanza imifino noma izithelo ngokugeleza okuncane, okulwa ne-splatter ngaphandle kokulimala; imodi yamanzi ye-aqua blade / imodi yokushanela ingasusa amasinki akho kalula futhi ngokushesha ngamandla amakhulu.
KULULA UKUHLANZEKA:I-aerator yekhwalithi ephezulu ye-ABS ingavulwa kalula ngohlamvu lwemali, awekho amanzi anzima nesikali, igcina izinga lokuphila nelamanzi lisetshenziswa
Iwaranti, UKUSEKELWA KWAMAKHASIMENDE: Kunikezwa iwaranti yeminyaka emibili nokuxhaswa kwamakhasimende. Ihlanganise ukubuya kwamahhala kwezinsuku ezingama-2.
Ukuthembela kugcizelelwa ngesakhiwo nge-Meas of vinyl eqinile, ngenkathi kuqedwa ekugcineni kweNicel Brushed Nickel
Isakhiwo esihlala isikhathi eside - ukwakhiwa kwepulasitiki okuhlala isikhathi eside kunikeza ukusebenza okuthembekile kusetshenziswa isiphetho se-Brushed Nickel ukumelana nokugqwala noma ukugqwala.
I-SKU: 5001 Categories: Izesekeli zefenisi, izesekeli Tags: Futha i-Hose, Futha uNozzle, Thepha
I-WOWOW Pop Up Lift Rod Assembly
I-WOWOW Brass Ceramic Cartridge Replacement G1 / 2 ...